पिसिओडीः महिलामा हुने सामान्य विकार |
पिसिओडीः महिलामा हुने सामान्य विकार
प्रकाशित मिति :2019-07-11 14:22:38
पोलिस्टिक ओभरियन डिजिज (पिसिओडी), यसलाई मेडिकल भाषामा पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम (पिसिओएस) पनि भनिन्छ । यो महिलामा पाइने एक प्रकारको सामान्य विकार हो ।
अनुमान गरिन्छ कि प्रजनन क्षमता उच्च रहने उमेर भएका १० औं लाखभन्दा बढी महिलालाई पिसिओडी छ । यिनीहरुमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई थाहा नै छैन कि उनीहरुलाई यस किसिमको विकार पनि छ भनेर । यस किसिमको समस्या पहिले–पहिले ३० देखि ३५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका महिलामा नै प्राय:जसो देखिन्थ्यो भने, अहिले कम उमेरका केटीहरुमा पनि (पिसिओडी) को समस्या बढी परिमाणमा देखिन्छ।
पिसिओडी भनेको के हो ?
महिलाहरुमा सेक्स हार्मोनको असन्तुलनको कारण अण्डाशयमा सानो-सानो गाँठ या सिस्ट बन्न जान्छ । सिस्टको आकार सानोमा केराउको जस्तो र ठुलोमा सुन्तला जस्तो हुन्छ । जसकारण महिलाको मासिक धर्मको साथै प्रजनन क्षमतामा पनि यसको असर पर्दछ । प्राय जसो सिस्ट बेनाइन हुन्छ जसले क्यान्सर गराउँदैन । तर ५ प्रतिशत सिस्ट मेलिग्नेन्ट हुन्छ । जसले क्यान्सर गराउने सम्भावना रहन्छ । यदि समयमै पिसिओडी को उपचार गरिएन भने पछि गएर क्यान्सरको रूप पनि लिनसक्छ ।
महिलाको डिम्बाशयमा सामान्य भन्दा बढी मात्रामा एन्ड्रोगेन हार्मोनको निर्माण भएमा डिम्बाशयमा डिम्ब विकसित हुने क्रममा कहिलेकाहीँ ‌ सिस्ट बन्ने गर्दछ । सानो-सानो तरल पदार्थयुक्त सिस्ट पानीको फोकाजस्तो डल्लो तयार हुन्छन जुन विस्तारै- विस्तारै आकारमा बढ़न थाल्छ । यसले गर्दा महिलामा प्रजनन (सन्तान उत्पादन) गर्ने क्षमतामा कमी हुन जान्छ र महिला गर्भधारणा गर्नमा असमर्थ हुन्छन् र बाँझोपनको समस्या देखिन्छ ।
पोलिस्टिक ओभरियन डिजिजबाट पीडित महिलामा निम्नलिखित लक्षणहरु पाइन्छ ।
अनियमित माहिनावारी छिटो हुनु वा नहुनु । घरि-घरि पिशाब लाग्नु, अनुहार/शरीरमा सामान्य भन्दा बढी केश हुनु, शरीरको तौल बढनु, उल्टी आउनु, टाउको दुख्नु । डन्डिफोर कपालमा चायाँ हुनु । तल्लो पेट दुख्नु, स्तन कडा सार्हो हुनु, सिस्ट ठुलो भए पछि पेट सुन्निनु, दिसा-पिशाब गर्दा दुख्नु वा गार्हो हुनु, गर्भधारणा गर्न मुस्किल हुनु, यौन इच्छामा अचानक कमी आउनु । पाठेघरमा सा-सानो पानीफोका गाँठ जुन गर्दा देखिन्छ । बारम्बार गर्भपात हुनुका साथै टाउको केश अत्याधिक मात्रामा झर्नु । शरिर मोटो हुँदै जानु र छालामा कालो, खैरो दाग देखिनु आदि लक्षणहरु देखिन्छन् ।
कारण केहो ?
पिसिओडी हुने मुख्यकारण भने महिलामा हार्मोनको उत्पादन सामान्य भन्दा बढी परिमाणमा हुनु हो । स्त्री रोग विशेषज्ञको भनाईअनुसार- विगत १० देखि १५ वर्षको बिचमा महिलामा पिसिओडी को समस्यामा ५० देखि ६० प्रतिशतले बृध्दि भएको छ । यसरी असामान्य रुपले वृद्धि हुनुका केहि खास कारणलाइृ पनि लिन सकिन्छ । जुन निम्नलिखित छन्।
असन्तुलित आहार :- पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउ-चाउ, मम, थुप्पा, हटडग जस्ता शरिरको लागि हानिकारक फास्टफुड तथा बढी तेलयुक्त, बोसोयुक्त र गुलियो आहार लिनु हो।
पिसिओडी हुनुको पछाडि मधुमेह र उच्च रक्तचाप जस्ता रोग पनि यसको कारणमध्ये एक हो । यदि परिवारमा कसैलाइ पिसिओडीको ईतिहास छ भने वंशानुगत पनि यसको एक कारण हो । कोलेस्ट्रोलको लेबल बढ़नु, एचडिएल कम या हाई हुनु,Triglyceridesको कारणले पनि पिसिओडी हुन सक्छ।
अत्यधिक जंक फुडको सेवन र व्यायामको अभावले युवा पिढीमा मोटोपन एक ठुलो समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ । हुन त, मोटोपन कयौ रोगहरुको घर हो। मोटोपन हुँदा शरिरमा अत्याधिक बोसोको कारण स्ट्रोगेन हार्मोनी को निर्माण सामान्यभन्दा बढी हुन्छ । जो डिम्बाशयमा सिस्ट बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्दछ । तसर्थ मोटोपनलाई पनि कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
आजको भागदौडको युगमा बढी रहेको मानसिक तनावको कारण मानिसको खानपान, रहनसहन, दिनचर्या बिग्रिसकेको छ । धूम्रपान, मधपान, राती ढिलो गरी खाना खानु इत्यादि कारणले पनि Hormonal imbalance हुन्छ ।
पिसिओडी रोगको निदान गर्न आवश्यकताअनुसार संबन्धित चिकित्सकले रोगीको निम्नलिखित परिक्षण जाँच गराउँछन् । यसबाट रोग र रोगीको अवस्थाबारे चिकित्सकलाई थाहा हुन्छ । सोहिअनुसार उपचारको व्यवस्था गरिन्छ। भिडियो एक्स-रे (Ultra Sound Scan of Pelvic) Vagina Serum LH Serum FSH LH :- FSH ratio DHEA-S Level आदि, टेष्ट गराइन्छ।
पिसिओडी को समस्या पूर्णरुपले निको पार्न धेरै कठिन छ । एलोप्याथिकमा हार्मोन्स(औषधिको) रुपमा बिरामीलाई सेवन गर्न दिइन्छ । औषधिबाट भएन भने आवश्यक परेमा रोगीलाई अपरेशन गर्ने सल्लाह पनि दिइन्छ र दुवैको सल्लाहमा अपरेशन गरी (सिस्ट)लाई निकालेर उपचार गर्ने गरिन्छ ।
होमियोप्याथिमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणहरुलाई मध्यनजर राखेर रोगीको समष्टिगत लक्षण (टोटालिटि अफ सिमट्मस)को आधारमा उपचार गरिन्छ । यस रोगमा सफलतापूर्वक प्रयोग हुने केहि होमियोप्याथिक औषधि यसप्रकार छन् ।
एपिस मेलिफिका, आयोडियम, लाईकोपोडियम, पोडोफाईलम, थुजा, पल्साटिला, मेगफाँस, नेट्रम म्युर आदि । उल्लेख गरिएका होमियोप्याथिक औषधिहरु आफ्नो नजिकका होमियोप्याथिक चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम निरन्तर उपयोग गर्नाले केहि दिनमै पुर्णरुपले पिसिओडीको समस्यालाई जरैबाट निर्मुल पार्न सकिन्छ। यस पद्धतिबाट उपचार गराउँदा विशेष लाभ यो छ कि यसको कुनै प्रकारको साईड ईफेक्ट (दुष्प्रभाव) हुँदैन । रोगीको पूर्णरुपले उपचार हुनुको साथ-साथै महिलामा गर्भधारण गर्ने क्षमता पनि बढ्न जान्छ ।
औषधि : डॉक्टरद्वारा दिएको औषधि समयमा निर्देशनअनुसार नै सेवन गर्नुपर्दछ । औषधिले डिम्वाशयमा गरेर गर्भधारणा हुनमा मद्दत पुर्याउन सक्छ । यदि तपाइृ‌‌ डन्डिफोरको उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो उपचार गर्ने चिकित्सकलाइ पोलिस्टिक ओभरियन डिजिजको समस्या छ भने जानकारी अवश्य दिनु होस् ।
शरीरको वजन कम गर्नु
यदि तपाई‌को शरिरको तोल बढेको छ भने कम गर्ने प्रयास गर्ने । धेरै जसो पिसिओडी का बिरामीहरुमा केवल शरीरको वजन कम गर्नाले पनि धेरै फाइदा भएको देखिएको छ ।
व्यायाम गर्नाले शरीरको वजन नियन्त्रणमा रहन्छ र पिसिओडी को कारणले हुने इन्सुलिन रेसिस्टेन्टको समस्या पनि कम हुन्छ । तपाई आफ्नो उमेर र शरिरको अवस्थाअनुसार हिँड्नु, दौडिनु, डोरी खेल्नु, पौडी खेल्नु या एरोबिक व्यायाम गर्नु जस्ता क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ ।
खानामा पिज़्ज़ा, बर्गर जस्ता शरिरको लागि नोक्सान गर्ने आहार लिनुको सट्टा सन्तुलित खानाखाने, प्रशस्त पानि पिउने, हरियो सागसब्जी, सिजनअनुसारको फलफुल समावेश आफ्नो आहारमा गर्नुपर्छ।
चिन्ता, शोक, भय, क्रोध इत्यादि तनाव बढ़ाउने वातावरणबाट टाढा रहने । योगाभ्यास, प्राणायाम, कपालभाति गर्ने । प्रशन्न चित्त रहने, हमेशा सकारात्मक सोच राख्ने ।